Budata egwu n'efu na ọnụahịa gam akporo gị Gam akporosis
Nweta egwu niile ị chọrọ n'efu na ngwa a na-akpali akpali maka gam akporo nke Huawei mepụtara
Ị chọrọ nweta egwu niile ị chọrọ n'efu na-enweghị mkpa ka wụnye ihe ọ bụla pirated ngwa ma ọ bụ site na iju isi mmalite? Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, M na-adụ gị ọdụ ka ị leba anya na vidiyo nkuzi agbakwunyere na m ga-ahapụ naanị usoro ndị a, ebe ọ bụ na n'ime ya ka m ga-eweta ma kụziere gị wụnye ngwa egwu mbụ nke Huawei nke ahụ na-abịa na njedebe nke ọtụtụ mba ndị China si na-ere na mpaghara Eshia.
Nke a mbụ Huawei music player ngwa, ọ bụ naanị ọnụ ahịa ndị ama ama ama ama ama ama na China na-ere ahịa na mpaghara China nwere arụnyere ya, ihe kpatara ya abụghị karịa na China egwu niile dị iji budata n'efu, ọ bụkwa n'ihi nke a ka ngwa ngwa mbụ nke Huawei music playback, nke ruru anyị European ọnụ na-conveniently gbanwetụrụ site Huawei onwe mmepe wepụ ndị a kwukwara functionalities maka nbudata free music na anyị nwere ike ịchọta ma ọ bụrụ na anyị na-ahọrọ ịzụta a Huawei ọnụ ozugbo na Mandarin ala. N'ezie, nbudata nke ngwa mbụ a nke Huawei bịanyere aka na ya ga-enweta na mpụga na Playlọ Ahịa Google Play ebe ụkpụrụ nke Mountain View anaghị ekwe ka ngwa nke ụdị a, ọkachasị ngwa maka egwu nbudata na-arụ ọrụ yana Huawei a nweburu. ngwa na-eme. Ya mere ugbu a na ị maara, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata otú iji nweta ihe mbụ Huawei music player ngwa, ihe mbụ onye Chinese ọnụ arụnyere na nke na-enye anyị ohere music download kpamkpam free, M na-adụ gị ọdụ ka ịpị «Nọgidenụ na-agụ nke a post» ebe obu na aga m ahapuru gi direct link ka ibudata ngwa.
1 Kedu ihe Huawei Music na-enye anyị?
2 Ma olee otu m ga esi esi tinye ngwa Huawei Music ka m wee budata egwu n’efu?
Kedu ihe Huawei Music na-enye anyị?
Kedu ka m ga-esi gwa gị, Huawei Music ma ọ bụ mbụ egwu Huawei Maka ala Asia, ọ na-enye anyị ọrụ niile nke egwu egwu kachasị mma anyị nwere ike ibudata maka gam akporo, yana ọmarịcha mgbakwunye pụrụ iche nke inwe ike ige egwu niile anyị chọrọ na usoro iyi egwu dịka anyị ga-eji ngwa ndị dị ka Spotify ma ọ bụ Gwuo Egwu nke Google. Ọ bụrụ na nke a, nke bụrịị ezigbo oge gara aga, anyị gbakwunye ohere ịnwere ike ibudata egwu niile anyị chọrọ kpamkpam n'efu na ogo dị elu ma ọ bụ ogo dị elu, anyị enweghị obi abụọ kachasị mma ọkpụkpọ egwu maka gam akporo ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ ihe kasị mma ngwa nke oge ibudata free music ozugbo na anyị gam akporo ọnụ.
Ma olee otu m ga esi esi tinye ngwa Huawei Music ka m wee budata egwu n’efu?
La mbụ Huawei music ngwa Ọ bụghị na eze dị na Playlọ Ahịa Google, n'ihi ya, anyị ga-enwe budata ozugbo na njikọ a nke ahụ ga-akpọrọ anyị gaa na ụlọ ọrụ gọọmentị Mirror APK, ihe kacha mma na nke kachasị ukwuu nke ngwa ngwa maka gam akporo.
Ozugbo ebudatara, naanị site na ịpị ngosipụta nbudata na-aga nke ọma nke na-egosi anyị na ngosipụta ngosi nke gam akporo n'onwe ya, ma ọ bụ na-ada nke ahụ, ịnyagharị site na ihe nchọgharị faịlụ gam akporo ọ bụla na / Download ụzọ yana ịpị akara ngosi nke ngwa ahụ, anyị ga zuru ezu maka ngwungwu akpaaka gam akporo na-apụta ka anyị wee nwee ike ịnakwere ngwa Huawei Music.
N'ezie, tupu ịme nke a, anyị ga-enwerịrị nhọrọ nke na-enye anyị ohere wụnye ngwa site na isi mmalite ma ọ bụ ngwa sitere na isi mmalite. Otu nhọrọ na anyị ga-enwe iji nwee ike si na gam akporo ntọala na ngalaba nke Nche.
Na nke ahụ na ịgbaso usoro ndị m na-egosi na vidiyo agbakwunyere nke anyị ji malite post a, ị ga-enwe ike ibudata free music ozugbo gị gam akporo ọnụ -enweghị mkpa iji ihe ọ bụla ọzọ na ngwa nke dubious si malite. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ maka gị, ịnwere ike ịnwale ihe ndị a free music download ngwa maka mobile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nweta egwu niile ị chọrọ n'efu na ngwa a na-akpali akpali maka gam akporo nke Huawei mepụtara
Enwere m ike ịnụ egwu, ibudata ya na-ajụ m »Nbanye na Huawei ID» bụ android mana ọ bụghị Huawei. Nhọrọ?
Mgbe m nyere ya ka ọ budata egwu, ọ naghị ahapụ m ... ọ naghị enye m nhọrọ nke mma ... na keyboard na-apụta dị ka a ga - asị na m ga - ede ihe ... anaghị m. mara ihe m na-emehie ...
Nyere X biko… daalụ
Jeffrey racagni dijo
Ọ naghị agbapụta.
Zaghachi Jeffrey Racagni
Enweghi PINO dijo
enweghị nbudata na-ajụ maka nbanye nbanye ... gịnị na-efu iji chekwaa ya na ekwentị ??? enyemaka androidsis
Zaghachi to ENRIQUE PINO
Ngwa ahụ n'onwe ya dị mma. ma ọ dị onye ọ bụla hụrụ ikikere ọ na-arịọ maka ya? N'ime ha, gụọ ozi SMS na mgbakwunye ozi, detuo ọdịyo. Tinye, hichapụ ma ọ bụ chọpụta ihe ndekọ mara na enweghị njedebe
Ebighebi ikikere nke na-adịghị eme uche, m na enwetatụbeghị iji wụnye ya
Enweghị m nsogbu na nbudata. Ọ dị m ka ọ dị mma. M hụrụ n'anya interface na ezigbo mma ọdịyo mma.
Ekwentị m abụghịkwa Huawei, ọ bụ otu Plus.
Olee otu i si mee ya ??
Amaghị m ma ọ nwere ihe ọ ga-eme ya, mana mgbe arụnyere ya mgbe ị mepee ngwa ahụ, ọ na-ajụ ikike ikike ebe, wdg. M gọnahụrụ ya ihe niile.
Mgbe ahụ emebeghị m ihe ọhụụ, mgbe m na-ege ntị n'ihe, m kụrụ akụ nke na-egosi na ala aka ekpe na ọ bụ ya. N'ezie, ọ pụtaghị na folda nbudata, ị na-achọ ya na njikwa faili ma ọ bụ na ngwa ahụ n'onwe ya, ọ na-egosikwa ya na egwu egwu (ngwa Google).
Galaxy s5 agaghị ebudata
N'ezie ọ naghị ebudata ... Banyere nkọwa banyere ịgọnarị ọnọdụ ahụ ... Amaghị m ihe ọ na-ezo aka, ihe m hụrụ mgbe m mepere ya bụ ibe na-ekpuchi ihuenyo na ọnọdụ Huawei iji jiri ngwa ahụ - Kedu nke ọzọ Ikike ị ga-enye iji gee egwu na-adị ka nke na - adịghị mma - ma ịnabatara ha ma ọ bụ na ịnabataghị ha.Ọ bụrụ na ịnabataghị ha, ịnweghị ike itinye ngwa ahụ. Mgbasa ozi bụ ụfọdụ ọrụ na-anaghị ezute ... ọbụlagodi na m. Daalụ.
Ga-abụ onye VIP ibudata na na na-enweta site na-akwụ ụgwọ. Ọ gaghị adị njọ gị ijide n'aka tupu ịdepụta ihe ọ bụla.
Nke ahụ abụghị eziokwu. Abughi m VIP, enwebeghi m ugwo ihe obula ma na ebudatara egwu ruo ubochi ato.
Emechara m tinye ya na ụzọ ndị e bipụtara na ndị m nwere ike ịnwale. Ihe abuo doro anya na o gha abu Huawei ma obu kwue ugwo. Ọ bụrụ na ngwa ahụ ekwughi na ebudatara egwu ahụ, kedu ka ọ ga-esi kwe omume ibudata ya ... lost tụfuru ntụkwasị obi gị lost
Mgbe e wedata ya, obere ihe ịrịba ama n’asụsụ Bekee na-egosi n’ime sekọnd ole na ole. Dịka m kwuru na ihe ndị ọzọ iji chọta ha ị chọrọ onye nyocha faịlụ n'ihi na ọ pụtaghị na folda nbudata.
Ekwentị m bụ Otu Gụnyere. Anọ m na-achọ inye aka n'ihi na echere m na ngwa ahụ dị mma, mana kedu ka ị ga-esi ghọta m, achọghị m ịma ma ị kwenyere m ma ọ bụ na ị kweghị.
Anọ m na-ebudata.
Ekwentị m bụ Otu Gụnyere.
Ọ bụrụ n’ịgụ n’elu, m kọwaara gị otu esi achọta egwu ndị ebudatara ozugbo.
Anọ m na-achọ inye aka n'ihi na ngwa ahụ dị m mma, mana kedu ka ị ga-esi ghọta ya, achọghị m ịma ma ha kwere m ma ọ bụ na ha ekwenyeghị. Anọ m na-ebudata.
Ndo, a zaghachiri azịza ya. Ruo mgbe ọzọ.
N'ebe ahụ. Na-asọpụrụ ikike nwebisiinka na ihe ọgụgụ isi. Ihe Nlereanya !!
Ma onye dere edemede a akwusila, ọbụlagodi na ọ bụ naanị nkeji, iji gụ ma tụgharịa uche n'ihe o dere?
Na ọ bụrụ na ... Eleghị anya ọ bụrụ na mmadụ na-eme oyiri na mado nke edemede gị wee jiri ya na-enweghị ikike gị ihe niile ga-ewe iwe.
Zaghachi na Nsphrs
Instagra na-ewepu otu n'ime atụmatụ ya kachasị mma
Nsogbu Royale ga-emesị mechie mmeghachi omume ahụ